MRI tsara indrindra amin'ny faritra ambany indrindra amin'ny mpamokatra sy famokarana kapoka mahery vaika | CSJ
Ny kapoka dia aretin-kozatra serebrovascular maranitra. Izy io dia vondron-aretina izay miteraka fahasimban'ny sela amin'ny ati-doha noho ny fahatapahana tampoka ny lalan-drà ao amin'ny ati-doha na ny rà tsy afaka mikoriana ao amin'ny ati-doha noho ny fahatapahan'ny lalan-dra, ao anatin'izany ny kapoka ischemika sy hemorrhagic. Ny trangan'ny fivontosan'ny ischemika dia avo kokoa noho ny lalan-dra hemorrhagic, mitentina 60% ka hatramin'ny 70% amin'ny totalin'ny kapoka. Ny tahan'ny fahafatesan'ny lalan-drà hemorrhagic dia avo kokoa.
Mampiseho ny fanadihadiana fa ny grevy an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra no nanjary antony voalohany nahafaty olona tany Chine ary antony lehibe mahatonga ny fahasembanana eo amin'ireo olon-dehibe sinoa. Ny kapoka dia manana ny toetra mampiavaka ny mararin'ny aretina, ny fahafatesan'ny olona ary ny fahasembanana. Ny karazan-kapoka isan-karazany dia samy manana ny fomba fitsaboana azy.
Ny rafitry ny sary malemy matevina avo lenta ampiasaina amin'ny famaritana sy fanaraha-maso ny lalan-dra mahery vaika dia mahafeno ny filàn'ny diagnostika klinika amin'ny dingana maranitra sy mahery vaika, ary ny fitsaboana simika ara-potoana dia mamonjy ny ain'ny marary marobe.
Fanaraha-maso an-tsaina tsy an-kijanona mandritra ny fotoana fohy, 24 ora, maharitra maharitra amin'ny fivelaran'ireo mararin'ny lalan-dra, manome angona bebe kokoa amin'ny dokotera.
Tsy vitan'ny hoe mahafeno ny fepetra takiana amin'ny diagnostika ara-pitsaboana izy io, fa azo ampiasaina amin'ny fikarohana siantifika ihany koa mba hahazoana fahatakarana lalindalina ny mekanisma sy ny firoboroboan'ny fikorotanana.
Ny rafitra dia miaro tena, azo entina ary mahavariana endrika, mahatonga ny rafitra ho azo ovaovina amin'ny tontolon'ny klinika, toy ny paroasy ICU, sampana vonjy taitra, sampana fitaratra sns.
Kely sy maivana ilay rafitra, ary azo apetraka mora foana amin'ny fiara mpamonjy voina, mihazakazaka mifanohitra amin'ny fotoana hamonjy aina.
Manomeza vahaolana voarindra sy fanaingoana manokana.
Teo aloha: Rafitra MRI finday
Manaraka: Shielding mavitrika an-tsaha elektromagnetika ambany
Homogeneity avo lenta sy fitoniana Benchtop NMR
Rafitra Radiotherapy tarihin'i MRI
Rafitra syntetika momba ny saha elektromagnetika